जनता बैंक र ह्याम्स अस्पताल धुम्बाराहीबिच स्वास्थ्यउपचार सेवामा छुट सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । ह्याम्स अस्पतालका अध्यक्ष आर. एस. भण्डारी र बैंकको ट्रान्जेक्सन बैंकिङ प्रमुख पुकार सु्वेदीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सम्झौताअनुसार जनता बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारी र तिनका आश्रितहरूले अस्पतालबाट बिशेष छुट पाउनेछन् । अस्पतालको विल भुक्तानीको क्रममा ग्राहकले बैंकको एटिएमकार्ड अथवा ग्राहक खुल्ने कुनै कागजात पेश गरी छुट सुविधा लिन सक्नेछन् ।